Composers Romantic oo ay caan ku music Qadiimiga ah
Top 10 Composers Romantic oo ay Music Qadiimiga ah oo caan ku
Composers Romantic ayaa lagu yaqaan ee la abuurayo xabbadood gaar ah iyo asalka ah ee shaqada muusikada ka xoq marnaba taabashada ku kor isugu darey kasta waxaa laga soo saaray iyaga ka hor. Sifo wax kala music Romantic ka noocyada kale ee muusiga tahay awooddiisa ah inuu ka dhaliya dareemo awood badan. Oo sifo waxa abuuray dad cusub oo cusub oo aan la jahwareerin ay laxanka raalli yahay, oo luuq macaan luuqee, iyo wada noolaanshaha nasteexo. Sidaa awgeed ay la dhacsan yahay sida Sweden adduunka muusikada heerka ugu sareeya ee sax oofiyo iyo sidoo kale tayadooda. Marka la eego hoos ku qoran yihiin ugu sareeya toban Romantic Composers oo taagan ee marinka xilligii Romantic iyo Music Qadiimiga ah oo caan.
1) Isxaaq Albeniz:
Isaac Albeniz waxa uu ku dhashay 1860 oo ahaa biyaaniiste Isbaanish iyo laxamiistaha. Waxa uu ahaa soo baxayo ayaa ah ilmaha oo hore qaab ciyaareed ahaa ee da'da afar sano. Waxa uu ka kooban yahay ugu horeysay waxaa la daabacay markii uu sideed sanno jir. Iyo markii uu 26 sano jir uu mar hore ku qoran in ka badan 50 biyaano xabbadood. Mawduucan ah mid ka mid ah uu isugu darey Asturias waxaa lagu daro ee 2008 filim cabsi Muraayadaha. Albeniz ee guusha koraysa ayaa waxaa ay guulo ku qoran inta lagu jiro sano ee la soo dhaafay ee uu noloshiisa. Masterpieces waxaa ka socda.
Aulin waxa uu ku dhashay 1860 ee Sweden oo ahayd walaashood ah ee Tor Aulin. Malaha Waxay ahayd mid ka mid ah dhowr haween ah oo composers iyada mar. Ayeeyo Aulin ayaa ahaa heer sare ah biyaaniiste, jilaa iyo macallin oo wax ku baray iyada biyaano. Qaab feedh dadweynaha by Aulin ahaa ee 1880 wada iyada iyo walaalkeed oo ka Brunns-salongen in Söderköping. Intii u dhaxaysay 1887 iyo 1901 Aulin siiyey dheehan la music ee iyada u gaar ah. Guulaha ugu muhiimsan waxay ahaayeen laba quartets xarig ay ku sifayn ka 1880naadkii. Waxay ku dhintay da'da shuqulladiisa muusikada ugu muhiimsan 68. Aulin ayaa soo socda.
Gustave Charpentier, ku dhashay 1860, wuxuu ahaa laxamiistaha Faransiis ah oo soo galay Conservatoire Paris ee 1881. Wixii cantata ka Didon uu ku guuleystay Prix de Rome ee 1887. shaqada muusikada ayaa keenay Charpentier aqoonsado loona saxiixo badan ahaa Louise. In 1900, kii ayaa loo Legion d'honneur, noqday sarkaal Grand ee 1950 iyo Taliyaha ah ee 1930. Ka dib markii uu ka kooban ee la soo dhaafay ee Julien uu naftiisa u qurxiyay, iyadoo qoraal music dhaleecayn, abaabulka xaflado iyo gacan askari oo ku dhaawacantay of WWI. Charpentier ahaa ugu fiican -known waayo, shuqullada soo socda.
Tan iyo maalintii
Julien, ama nolosha gabayaa
Dareenkaa ee Italy
Mahler, ku dhashay 1860, wuxuu ahaa laxamiistaha ah Austria soo daahay-Romantic koowaad dadweynaha qaab joogay da'da toban. In 1881 uu sameeyay uu opera-buuxa ugu horeysay in uu ahaa Verdi ee Il trovatore. Mahler uu u saftay New York on January 1 1908 at Opera Metropolitan la Wagner ee Tristan und Isolde. Waxa uu wax ka ilo badan oo uu music sida cowbells iyo birdcalls si cilmiyaysan dabiiciga ah iyo baadiyaha, eeg waddada, dalka-qoob iyo fanfares bugle barbaro. Mahler dhintay sannadkii 1911 ka dib markii 260 qaab qaar ka mid ah oo kala ah:
Bizet ee Carmen
Songs ee Musaafurka ah
Pintos Saddex The
Laxamiistaha Maraykanka ku dhashay 1860 ee New York City Edward MacDowell, dhaqaaqay France oo ay da'diisu ahayd 17 ayaa la dhigay conservatory Paris. In 1888 MacDowell soo laabtay Maraykanka. In 1896 waxaa loo magacaabay professor of music Jaamacadda Columbia. In 1904 isagu wuu ka ciso xubin ka mid ah toddobada Americans koowaad ee American Academy of Arts oo Warqadaha. Edward dhintay 1908, kadib markii laga dementia. Maanta, Shuqulladiisa soo socda ayaa loo sharfay iyada oo xiligii isticmaarkii MacDowell in xaaskiisa la aasaasay.
Si Rose Wild ah
Laxamiistaha ah Austria ku dhashay 1860 ee Slovenia Wolf, ilmo soo baxayo ayaa ah kuwaas oo bilaabay qaadashada casharada biyaanaha iyo rabaab ee da'da afar sano. In nolosha mustaqbalkiisa uu odhan jiray "Wild Wolf" oo uu tilmaamay dabcigiisa kulul iyo xoog dhegeysiga xukumay, isaga oo uu soo jiidashada shakhsi isaga dareenka kasbadeen. Richard Wagner ahaa Wolf ayaa saameyn weyn muusikada iyo waxa wanaagsan ee loo yaqaan ee uu lieder in la qaabeeyey ka dib markii kuwa Robert Schumann iyo Franz Schubert. Ka dib markii ay ka kooban oo ka mid ah shuqulladii ka dib markii uu dhintay waali syphilitic ee 1903 ee Vienna doonka ah.
Intoodii hadhay, oo ay ku nastaan
Biyaaniiste A, laxamiistaha ah, siyaasi iyo afhayeenka ka mid ah madax-bannaanida Poland, Ignacy Jan Paderewski uu xiiseynayo music xitaa da 'ah goor hore oo uu u saftay muusikada ee 1887 isaga siiyey caan weyn. Waxa uu noqday adduunka caan ku Minuet ee G, Op. 14/1. Inta lagu guda jiro WWI uu noqday xubin firfircoon ee Guddiga Qaranka Poland iyo dagaalka ka dib loo magacaabay xilka Ra'iisul Wasaaraha Poland. 1922 ayuu si uu naftiisa u muusikada ku soo laabtay. Oo shuqulladiisa muusikada ka mid ah kuwan soo socda.
Symphony in yar B "Polonia"
Laxamiistaha A Ruush iyo biyaaniiste, Arensky mar hore ka kooban heeso iyo xubnihii piano markii uu Maxamedwardi ahaa sagaal. Ka dib markii halabuurka ee iyo qalin Petersburg Saint ka Conservatory ee 1882 uu noqday borofisar wax ka dhiga Moscow Conservatory laakiin ku soo laabtay Saint Petersburg sida agaasimaha Choir Imperial ee. Walxuhu muusikada Arensky ayaa waxaa si weyn u saameeyay Pyotr Ilyich Tchaikovsky laakiin uu joogay uu ugu fiican qolkii music. Waxa uu ku dhintay da'da 44 qaaxada ee sanatorium ah ee Poland ka dib markii halabuurka soo socda shuqullada muusikada.
Isbadalka on Mowduuca ah Tchaikovsky
Habeenada ee Masar
Dhunbasho ayaa, Op. 61, cantata
Fantasia on Folksongs Ruushka
The laxamiistaha Greek caalamka ugu mahadnaqayo Spyridon Samaras uu ahaa gaar ahaan dhacsan operas uu. Uu opera hore Torpillae ayaa loogu markii uu ahaa 18 jir ka dib oo uu noqday xubin muhiim ah oo goobta opera. Waxa uu qadarin u halabuurka Heesta Olympic in loo isticmaalay xaflad kasta furitaanka Winter Olympics tan iyo 1960. Ka hor inta uu ku dhintay 55 jir ah ayuu bilaabay curinta uu opera ee la soo dhaafay Tigra laakiin marna ku dhameysatay. Samaras ku camal-yada waxaa lagu dadku dhacsan yahay qaar ka mid ah kuwaas oo soo socda.
Romance ama biondinetta ayaa
Mid ka mid ah composers Jarmal ee ugu goolasha badan ee uu mar Berger bilaabay muujinaya calaamado xiiso muusikada da 'yar. Waxa uu sameeyay uu riwaayadii ugu horeysay markii uu ahaa afar iyo toban jir ah. Intaas ka dib wuxuu soo baxay ka koobanahay heeso badan oo u shaqeeya biyaano ah. Isaga oo isugu darey muusikada muujiyaan dhadhan wada noolaanshaha iyo counterpoint farsamooyinka dissonant. In 1903 wuu xubin ka mid ah German Royal Academy of Arts oo waxaa sidoo kale loo magacaabay 'Hofkanpellmeister ee Meiningen. Shuqulladiisa ugu muhiimsan Ka dib markii yihiin.
Serenade u Players iyo toban Wind, op. 102
Rabaab Sonata, op. 7
Sonata ee weyn ee B
Afar Fugues, Op. 89
Perusing iyada oo taariikh nololeedyadii gaaban oo ka mid ah fanaaniinta weyn dusha iyo sidoo kale ay muusikada u shaqeeyo mid ka mid ah aan ku caawin kartaa, laakiin iyaga jecel u kacaankii abuuray by hordhaca ah ee ku sifayn ee music Romantic dunidan. Waxay ahayd dhow dhow haddii music Romantic sugayay in la hoobato qarxaya by kuwaas fanaaniinta dareen. Dhab ahaantii, music Romantic toosay dhadhansiinno nasinta, sida ku cad ugu abaalmarino iyo abaalmarino badan oo ku guulaystay, oo uu si wanaagsan u helay dadweynaha gacmo furan.
Download music jaceyl free la TuensGo ka net
> Resource > Music > Top 10 Composers Romantic oo ay caan ku music Qadiimiga ah